တစ်ဦး SharePoint အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက် Next ကိုအဆင့်
ဤနည်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ SharePoint ခွအေနအေဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြပြီးအနည်းငယ်ကြောင်နဲ့တူညညျးညူ။ ဒါရိုက်တာညှိနှိုင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ကြီးမားပြောင်းလဲမှုပေါ်တွင်သင်ချီးမွမ်းနှင့်အပြင်စွမ်းရည် anyplace ထံမှအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များရ။ သငျသညျအနညျးငယျသောအရာကိုအခြားသူများကိုနိုငျသညျ, ဂုဏ်ယူပါတယ်အောင်မြင်ပါတယ်!
အစဉ်စွဲခြင်း, ပုံမှန်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအပြီးယူပါလိမ့်မယ် ...
အဆိုပါ interface ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြည့်နှင့်အတူမြှခံရနိုင်မလား?
ဒါကြောင့်ဖြစ်ဟန်ကြောင့်လို့ရတဲ့လည်ပတ်သော, သေးသောကြောင့်ပါလျှင်ပိုကောင်းတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာပါလိမ့်မယ် ...
ဤအမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရန်တုံ့ပြန်မှုမကြာခဏအုပ်ချုပ်သူများ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတိတ်ကောင်းစွာအောင်မြင်ရန်နှင့်အချို့ကိုသင်အချိန်မဆိုဖြစ်ရပ်အတွက်, သင့်ဒီဇိုင်နာထိပ်တန်းဝတ်ဆင်ကြောင်းလိုအပ်သည်။ ကတက်ကိုင်စေခြင်းငှါအဖြစ် Be ... သင်ကဒီဇိုင်နာမဟုတ်ပါဘူး။
တိုးတက်မှုတစ်ခု, အသီးအနှံများပြောင်းရွှေ့ပိုင်းတွင်မှာ overpowering ခံရဖို့ပေါ်လာနိုငျသော multistage လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကလျောက်ပတ်သောအစီအစဉ်နှင့်ပြင်ဆင်နေမှန်ကန်သောနှင့်အတူချဉ်းကပ်ဖို့လုံလောက်ရိုးရှင်းသောပါပဲ။ သင့်ရဲ့အနိုင်ရခြင်းအားဖြင့် မိုက်ကရိုဆော့ဖ MCSD: App ကို Builder လက်မှတ်သငျသညျ SharePoint တိုးတက်မှု၏ရံဖန်ရံခါ overpowering ရှုပ်ထွေးကိုင်တွယ်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ အကျိုးကိုအဖြစ်, သင်ဒါ့အပြင်အချို့သောအရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုံခြုံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနေကြသည်။ ကြောင်း၎င်း၏တစ်ဦးအားကိုးတကယ်တော့ SharePoint အင်ဂျင်နီယာများအနေနဲ့ဆန်းကဒီအခိုက်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိများမှာ!
မည်သို့ပင်သင်တစ်ဦးတိုက်ပိတ်စနစ်ကအလုပ်မလုပ်ခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ် SharePoint တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲလယ်ယာ, သင်သည်သင်၏အသင်းအဖွဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုညှိနှိုင်းဖို့သင့်ဆာဗာခွအေနအေဒီဇိုင်းသို့အရင်းအမြစ်များကိုထားမရေမတွက်နိုင်သောနာရီရှိသည်။ SP ရဲ့တသမတ်တည်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ဤသင်ယူမှုသင်ကတိုးတက်မှုသို့ရွှေ့ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖွင့်သည့်အခါအဓိကအဆင်သင့်အနေအထားပေးသည်။ ယခုမည်သို့အောက်ခြေသဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းမှထိပ်တန်းများ၏အဖြစ်ကိုသင် SharePoint လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကသင်၏အဖွဲ့အစည်းဖို့ရည်ရွယ်ပါသည်။
အချိန်အများကြီးမဆို code ကိုမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်း SharePoint နှင့်အတူထည့်သွင်းစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာယခုအဖြစ်ပါဝါ SharePoint သူ့ဟာသူအတွင်း၌တည်ရှိသည့်အခါမိမိစိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်ညျဆောကျနေတဲ့စွန့်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအလိုင်းများတလျှောက်တွင်ပြုလုပ် SharePoint ဥပမာ, ဆိုက်စုဆောင်းခြင်း, applications များ, entries တွေကို, အလွှာများနှင့်မှတ်တမ်းများမှစိတ်ဝင်စားဖို့သောတိုးတက်မှုဖွဲ့စည်းပုံမှာအပေါ်တစ်ဦးအခိုငျအမာလက်ကိုင်ရမယ့်စမတ်အတွေးပါပဲ။ သငျသညျထိုနည်းတူ SharePoint ရဲ့ ALTER device ကို Microsoft က Office ကို SharePoint ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် acclimate သင့်၏။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောစိတ်ကြိုက်စီရင်ရန်မ programming ကိုလိုအပ်ကြောင်းပါဝင်သည်မရင်း။
သငျသညျအနညျးငယျ SharePoint-အထူးသဖြင့်သင်ကြားပို့ချအတန်းနှင့်သင်၏ထိုးထွင်းသိမြင်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသင်တန်းများသင်သည် SharePoint များအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနှင့်အလားအလာကုဒ် compose ဖို့အရေးကြီးတယ်နားလည်မှုအဆင့်ရှိသည်အာမခံခြင်းဖြင့် SharePoint တိုးသို့ရွှေ့ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်ထား:
အဆိုပါ Microsoft က SharePoint Server ကို 2013 70-331 သင်တန်းအခြေခံတည်ထောင်ခြင်းနှင့်အစီအစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်း။ မည်သို့ပင်ယခုကဲ့သို့အသငျသညျရွေ့လျားမှု၌ဤအချက်အလက်များ၏အတော်လေးနည်းနည်းသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်နိုင်ခြေ၏, သင်သည်ဤသင်တန်းပေးနားလည်မှုများတိုးချဲ့ profundity အားဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရနိုငျသညျ။
သငျသညျ Jedi မာစတာမှ SharePoint Padawan ကနေတိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားကြသည်သောအခါ, ပိုပြီးတိုးတက် Microsoft က SharePoint Server ကို 2013 70-332 သင်တန်းရှိသငျသညျရလိမ့်မည်! ဒါဟာသင့်ရဲ့အခြားဒေတာများကိုစနစ်များနှင့်အတူ SharePoint ချိတ်ဆက်ဖို့စီးပွားရေးကွန်ရက်အုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်ထုံးစံဖြေရှင်းနည်းများ, actualizing နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းများအတွက်ထူးခြားသောအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားစုဆောင်းခြင်း: တစ်ဆုလာဘ်အဖြစ်ဤသင်တန်းများနှစ်ခုစလုံးသင်သည်သင်၏ MCSE သူတို့ကို add ရန်ဆန္ဒရှိသောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ် related Microsoft ကစာမေးပွဲဖြေဘို့သင့်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး MCSD ဆီသို့အောက်ပါချဲ့မနေတော့: App ကို Builder လက်မှတ်တစ်ဦးရရှိရန်ဖြစ်ပါသည် MCSA: Web ကို Applications ကိုသို့မဟုတ် MCSA: Universal ကို Windows ပလက်ဖောင်း Cert ။ နှစ်ဦးစလုံး SharePoint တိုးတက်မှုများအတွက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်သကဲ့သို့, သင်တစ်ခုခုကိုကောက်လို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့သူကနှစ်ဦးစလုံးကိုလိုက်နာမှပညာသတိရှိသောနိုင်ပါသည်။
တစ်ခုခုရရန်လိုအပ်သည်နှစ်ခုစာမေးပွဲရှိပါတယ် MCSA လက်မှတ်, သငျ၏လုံလောက်သော comprehension တက်ကောက်ဖို့အလေ့အကျင့်အပေါ်မှာလက်-ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတွေအများကြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ASP.NET or ကို C # programming ကို။ Visual Studio ကသငျသညျ SharePoint applications များ၏နမူနာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဖွ, နှင့် Microsoft စိတ်ကူးအခြေအနေများတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုဖုံးအုပ်ထားဗျူဟာလမ်းညွှန်ပေးသည်။ ဤအမှတ်သားစရာများ apparatuses နှင့်အတူ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကဲ့သို့အောင်မြင်သောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးဦးတွင်မျက်စိတမှိတ်၌သင်တို့၏တိုးကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ထက်မြက်နိုင်ပါတယ်။
ဤအနည်းလမ်းပြီးဆုံးကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်သည်သင်၏ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ် App ကို Builder အဆိုပါ Developing Microsoft က SharePoint Server ကို 2013 Core Solutions စာမေးပွဲဖြတ်သန်းနေဖြင့် Cert ။ ဤသည်စာမေးပွဲဖြေဆိုသင့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်မယ့် SharePoint တည်ထောင်ခြင်း tweaks splendidly မှနှစ်ဦးစလုံး programming နဲ့မကုဒ်ဖြေရှင်းချက်အသုံးချဖို့အပေါ် concentrates ။
ရန်လမ်း App ကို Builder လက်မှတ် တစ်ဦးအတော်လေး remunerating မှတ်သားစရာများအတွေ့အကြုံကိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က unapproachable ဖြစ်သည်ထင်ရှားကြောင်းကိစ္စရပ်များကိုယခုကုဒ်သာစုံတွဲတစ်တွဲလိုင်းများနှင့်အတူအခြေချနေထိုင်နိုင်ပါသည်။ သင်၏အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမြတ်အစွန်းချွတ်ယူသကဲ့သို့သင်တို့ဝမ်းမြောက်စွာအသစ်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာထိပ်တန်းဝတ်ဆင်နိုင်သည်!